Iziqhamo Shop Christmas Edition |
Iziqhamo Shop Christmas Edition
Eli xesha leeholide apha kwaye kungoko NetEnt uye elinye inyathelo ukuphuhlisa imidlalo zabo, ndibanike ngokundibamba iKrismesi. Nandipha Iziqhamo Shop Christmas Edition apha Coinfalls Casino Zokubeka mfono UK, slot ezithandwayo wafumana nje kakuhle olu hlelo. Umdlalo slot esekelwe xesha leeholide na kwibhola kakhulu asigcinele abadlali, eziphakamayo uze balungele ndise abanye nguye emangalisayo le slot. Kumngxunyana imincili Fruit shop luye lwalungiswa kakuhle ukuba ezinye axhaphaze amangalisayo abadlali.
le Zokubeka mfono UK umdlalo sele igqityiwe imizobo ezisemgangathweni features a Gameplay elula, kungoko abadlali zonke iintlobo lungadlala lo mdlalo slot umdla. Imibala eqaqambileyo neesimboli iKrismesi siboniswe Ngasemva qiniseka ukuba abadlali undwendwe nasekuthetheni. Kukho adakasa, Uchithachitha nangaphezulu ukuze abadlali silonwabela lo mdlalo slot. Yiya phambili abone iimpawu ezikhethekileyo nale slot iKrismesi themed.
Malunga umphuhlisi Fruit Shop Christmas Edition
Umbhekisi phambili wesi iKrismesi Imnandi Zokubeka mfono UK na NetEnt kwaye basoloko eyaziwa ngokuba endalweni ukuba eziqeshwe ngasinye imidlalo zabo yekhasino. Zisebenza ukwenza eyona yiyo akuwedwa abalandeli.
Kunye nobukhulu eziinkozo 0.01-2.00, mincili Fruit Shop Christmas Edition unalo 5 namacwecwe kunye 15 paylines. Yeempembelelo ngexesha leeholide, ukuba yinto eyenza umdla Zokubeka mfono UK ukuba unalo imiqondiso amahle abadlali ukunandipha. Kwakhona yenzelwe ukulungela uvakalelo lomoya leholide kwaye kungoko abadlali baya kuba nakho ukonwabela ubuhle iKrismesi kunye macwecwe kule slot.
Ukwanda kunye nokuncipha iqhosha ingasetyenziswa ukulungisa ubungakanani bet, yaye isixa bet ubukhulu omkhulu limisela isixa win, Ngoko qiniseka ukuba ukulungisa ubungakanani bet ngobulumko. The Fruit shop ke sendle kule game slot kwaye ke ziya kuthatha ezinye iimpawu ukugqibezela imixube win kunye aziyeki ivideo singamiswa babethe ngeesimboli ezahlukeneyo iziqhamo umdlalo emilile.
Iziqhamo Shop Christmas Edition entle Zokubeka mfono UK ukuba iye yaphononongwa ngobunjineli ezineempawu ezimangalisayo. Iintlahlela ezahlukeneyo kunye nemiqondiso umdlalo slot kuba nguye amangalisayo abadlali ukuya kumbamba zonke olusukela ekunene. Yiya phambili kwaye ukujija macwecwe lo mdlalo slot kwaye ke izibane iKrismesi ndinise ezinye axhaphaze ezimangalisayo.